Rako Bhizinesi uye Kushambadzira seRwizi | Martech Zone
Rako Bhizinesi uye Kushambadzira seRwizi
Chishanu, July 3, 2009 Svondo, Nyamavhuvhu 23, 2009 Douglas Karr
Ndakave nenguva yakanaka mangwanani ano achitaura shopu naLorraine Bhora. Kambani yaLorraine inonyanya kuita zvine hungwaru zvirimo zvemabhizinesi madiki kusvika epakati mu Indianapolis - inosanganisira blogging, matsamba enhau uye zvinoburitswa. Lorraine anga ari mutsigiri mukuru nemurume wake Andrew iguru mukomana uye anoshamisa muimbi.
Ini naLorraine takave nemukana wekushandira makambani makuru kwazvo, asi isu tinoda kukurumidza uye kufara kwebhizinesi diki. Lorraine anokurudzira vese vadzidzi vake kuti vashandire bhizimusi hombe kwemakore akati ... Ini ndaikurudzira futi. Izvo zvidzidzo zvinodzidziswa muhutungamiriri mukambani hombe zvinogona kuve zvakakosha kana uchiita bhizinesi diki.
Mune bhizimusi rakakura kwazvo, kuti uchengetedze kugadzirwa, unofanirwa kupa vatungamiriri mabasa. Vatariri vanoita chiono chevatungamiriri uye vanoongorora vashandi. Mamaneja anoenzanisa zvakakosha uye kubvisa zvipingamupinyi. Madhairekitori anobatsira kuchengetedza muono wenguva refu uye kuona kuti dhipatimendi iri kugara munzira. Vapurezidhendi vanogadzira iwo ekuona kwenguva refu uye zano remasangano. Ivo vanhu vari pamusoro gwara, kusimudzira, cheerlead, uye kutarisira bhizinesi.
[Mufananidzo wakatemwa kubva pa kumashure kwakawanikwa paGnome]
Lorraine akauya nedimikira rakanaka. Kuva mutungamiri mukambani zvakanyanya sekudzora rwizi. Kana chinangwa chako chiri chekumisa rwizi, iwe unozosangana nematambudziko! Makambani ane simba… iwe uchaita nyonganiso huru kana ukangoramba uchiedza kukanda madhamu kana kuendesa mvura kwaisingade kuenda. Micromanaging rwizi haigone chero chinhu asi nyonganiso.
Chinangwa chemutungamiri chinofanirwa kunge chiri chekushandisa kumhanyisa kwemvura kuti irambe ichitungamira mafambiro emvura achienda munzira inodiwa nechiono. Mutungamiriri wega wega musangano uye zvikwata zvavo zvinotevera nevashandi zvombo zvekuchinja simba. Zvinoda kuti mutungamiriri agadzirise, ape simba, uye ape mabasa anodikanwa… uye nekuenderera mberi nekutarisa kumusoro uye nekambani iri kunanga.
Izvi hazvina kusiyana neSocial Media uye Kushambadzira Kwepamhepo. Mishandirapamwe yakavakwa nechimbi-chimbi uye nzira dzinogara dzichichinja dzinogona kuguma nemhedzisiro diki pano neapo Yenguva refu-nzira nzira dzinosimudzira yega yega svikiro kune simba rayo, neakagoverwa zvakafanira zviwanikwa, zvinogona kunongedza rwizi rwemari yekambani yako. Rwizi rwucharamba ruchifamba nesimba risingatendeseki… mubvunzo ndewokuti iwe unozoshandisa here kana kwete iro simba kana kurirwisa!
WordPress iPhone Mapulagi: Admin uye Musoro